RX အခမဲ့ပုံစံ Semi-Finar Polarized တိုးတက်သော Optical မှန်ဘီလူး -Polarized မှန်ဘီလူး -Weihai Dingxin Optical Co. , Ltd
သင်ဒီမှာပါ : မူလစာမျက်နှာ>ကုန်ပစ္စည်း>Polarized မှန်ဘီလူး
RX အခမဲ့ပုံစံ Semi-Finar Polarized တိုးတက်သော Optical မျက်ကပ်မှန်
FOB အညွှန်း စျေးနှုန်း:
$ 2.60 - $ 20.00 / စုံတွဲများ | 500အားလုံး (အောင်မင်း။ အမိန့်)
အရောင်: Brown Gray Green
အရေအတွက် (Pairs) 5000 >1
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (နေ့များ) 20 Negotiable အ
စိတ်ကြိုက်လိုဂို (MOQ: 20000 Pairs)
စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုး (MOQ: 20000 Pairs)
အညွှန်းကိန်း 1.50 / 1.56 / 1.60 / 1.67 ပွန်းစားခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်6~ 8H
မှန်ဘီလူးအရောင် မီးခိုးရောင်; အညို၊ G-15
အခြေစိုက်စခန်းကွေး6/ 8
02. Finished Polarized Lens
မှန်ဘီလူးအရောင် မီးခိုးရောင်; အညို၊ G-15 အခြေစိုက်စခန်းကွေး6/ 8
အချင်း 70 / 75MM အထပ် AR; REVO; Mirror;
ရုပ်ရှင် tac မှန် CT 2.0 / 2.2mm
Frame Suggested Full hand-made acetate frame
မှန်ဘီလူးအရောင် Grey; Brown;G-15 အခြေစိုက်စခန်းကွေး6/ 8
အချင်း 73/78 / 81MM မှန် CT 1.9 / 2.2mm
အထပ် AR; REVO; ကြေးမုံ၊ စူပါ Hydrophobic
Frame Suggested Sunglasses, Sports Glasses or Goggle, Safety Glasses
03. Cr-39 S/F Polarized Lens Technical Data
CR 39 မျက်ကပ်မှန်
Poly Carbonate မှန်ဘီလူး
ထိပ်တန်း Bifocal မျက်ကပ်မှန်
Flat Top Bifocal မျက်ကပ်မှန်
မမြင်နိုင်သောထိပ်တန်း Bifocal မျက်ကပ်မှန်
Mutli Focal မျက်ကပ်မှန်
အခမဲ့ Form ကိုမျက်ကပ်မှန်
PC Photochromic မှန်ဘီလူး
Trivex Photochromica မျက်ကပ်မှန်
PC Polarzied မှန်ဘီလူး
Semi Finised မှန်ဘီလူး
Dingxin Optical ကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းအထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ Dingxin coversရိယာအကျယ်အ ၀ န်းမှာ ၃၂၀၀၀ စတုရန်းမီတာရှိပြီး၊ အလုပ်သမား ၃၈၀ ခန့်ရှိသည်။
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ resin မှန်ဘီလူးအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်မှုသည်တစ်နေ့လျှင် ၅၀,၀၀၀ ခန့်ဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုသည် ၁၈ သန်းအထိရှိသည်။
6.When we finish the production, we will inform you to pay for the rest of the money.And we will delivery to you asap when we receive the balance.
စက်ရုံလက်ကား ၁.၅၆ photochromic မီးခိုးရောင်တိုးတက်သော optical မှန်ဘီလူး
စက်ရုံအဆင့်အတန်း ၁.၅၆ photochromic ရောင်ပြန်ဟပ်သောမီးခိုးရောင် hmc optical lens